Home∕समाचार∕देउवाको चौथो सत्तारोहणमा ३ सय ६० सांसदको समर्थन : यस्तो छ संसदको अङ्क गणित!
२१ जेष्ठ २०७४, आईतवार २१:१० June 4, 2017 koselihk 0
३ जुन २०१७। काठमाण्डौ
आइतबारको साइतमा प्रधानमन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा मंगलबार संम्भवत: मूलुकको ४० औ प्रधानमन्त्रीमा भारी समर्थनका साथ चयन हुने छन् ।
यो उनको चौथो सत्तारोहण हो । उनी यसभन्दा अगाडि तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पहिलो पटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनकै कारण तत्कालीन माओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्दुक बोकेर जंगल पसेको थियो । जसका कारण करिब १७ हजार जनताले बलिदानी दिन बाध्य भएका थिए । भने उनकै प्रधानमन्त्रीत्व कालका राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी भउको थियो ।
त्यस्तै उनी दोस्रो पटक २०५८–२०५९ सालमा बनेका थिए । भने तेस्रो पटक २०६१–सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।नेपालको इतिहासमा देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल सबैभन्दा विवादास्पद काल बन्यो । देउवाको कार्यकालमा सांसद् खरिद–बिक्री प्रकरण, सुरा–सुन्दरी काण्ड, पजेरो खरिद काण्ड, पुरूष सांसद्ले सुत्केरी भत्ता, अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल बनाउन सांसद्हरुलाई बैंकक घुमाउन पठाउने काम पनि उनको पालामा नै भएको थियो । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसद् विघटन गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । आफूलाई प्राप्त पदलाई जोगाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने काममा देउवा निकै अगाडि देखिन्छन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भनी पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । नेपाली राजनीतिमा राम्रोभन्दा पनि नराम्रो काममा बढवा दिएका कारण मुलुकले अहिले पनि दुर्दशा बेहोर्नु परेको आरोप उनीमाथि अहिले पनि लाग्ने गरेको छ । उनकै अक्षमताका कारण नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ गते कु गरेका थिए भने २०६१ साल माघ १९ गते शाही कदम चालेर निरङ्कुशता लादेका थिए भलै त्यो निरङ्कुशता ज्ञानेन्द्र कै लागि अभिसाप बन्यो ।
फेरी यसपटक शेरबहादुर देउवा चौथो पटक सत्तारोहण गर्दै छन् । त्यसका लागि देउवाका पक्षमा अहिलेसम्म स्पष्ट बहुमत जुटिसकेको छ । कांग्रेस माओवादीको पूर्व सहमति बमोजिम नै सत्ताको डिजाइन बनिसकेको छ भने मोटामोटि मन्त्रालय बाँडफाँडो खाका पनि तयार भएको बुझिएको छ । देउवाले आफ्नो पक्षमा मत जुटाउन कमल थापाको राप्रपालाई ४ मन्त्रालय दिने र संविधान संशोधनको प्रस्ताब पास गराउने लिखित सहमति नै जनाएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको समर्थन पनि जुटाएका छन् ।
यसरी पुगेको छ ३ सय ६० मत
नेपाली कांग्रेस – २०६,
माओवादी केन्द्र – ८१,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – ३७,
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी – १६,
संघीय समाजवादी फोरम – १५,
नेकपा संयुक्त – ३,
अखण्ड पार्टी नेपाल – १
र समाजवादी जनता पार्टीका – १
अहिलेसम्म जम्मा ३६०
यस्तै, राजपा नेपालले आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ । संसदमा हाल कायम रहेको ५९४ मध्ये प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २९६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
विपक्षमा कति छ मत
नपा पार्टी – १
परिवार दल – २
नखुलेका अन्य – ३७
किन लम्बियो कांग्रेसको सत्तारोहण ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण मंगलबारसम्मका लागि लम्बिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा जारी अबरोध हटाउन अस्वीकार गरेपछि आइतबारका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले विहान ११ बजे बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरी सदन सुचारु गर्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक डाकेकी थिइन् ।
शीर्ष नेताहरुको उक्त बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप छलफल गर्न जरुरी रहेको भन्दै दुई दिन बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि बैठक सरेको हो । बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो । यसरी मिति र समय तोकेर पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सरेको नेपाली संसदीय राजनीतिको इतिहासमा नै पहिलो पटक हो ।